အရင်နှစ်တုန်းက အိုစမာဘင်လာဒင်ကို အသေ ဖမ်းဆီးရမိသည့်သတင်းကြားရတဲ့အခါ ပျော်လွန်း၍ ခုန်ပေါက်ဟစ်ကြွေးနေသည့် အမေရိကန် လူမျိုးများ ပုံကို သတင်းတစ်ပုဒ်တွင်ကြည့်လိုက်ရသည်။ သာမန်အားဖြင့် လူတစ်ယောက်သေသွားသည့်အတွက် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သည်ကို ရှုံ့ချစရာပင်။ သို့သော် ၄င်း၏နောက်ခံအကြောင်းတရားကို သိထားသူတစ်ယောက်အဖို့ ကမ္ဘာကြီး၏ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ခုလျော့သွားသည့်အဖြစ်ကို နားလည်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
တစ်နှစ်က အလွန်လေးစားရသည့် ဆရာကြီးတစ်ဦး ဆုံးပါးသွားသည့်သတင်းဖတ်ရသည်။ ရင်ထဲကဟာကနဲ။
သူ့လိုလူ တစ်ဦးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရသည့် အတွက် နှမြောတသဖြစ်မိသည်။ သူမရှိတော့၍ သူ့စာအသစ်များမဖတ်နိုင်တော့ပြီ။
ဒီတစ်ပတ်က အလွန်နှစ်သက်ရသည့် အဆိုတော်ကိုခင်မောင်တိုးသည်လည်း လောကကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပြန်သည်။သူမရှိတော့မှ သူ့သီချင်းတွေကို ပိုပြီးတမ်းတရသည်။ ဂီတလောကအတွက်၊ သူ့သီချင်းတွေကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးသူတို့အတွက်ကြီးမားသည့်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပင်။
လူဦးရေ သန်းခြောက်ထောင်ကျော်သည့် ဤကမ္ဘာကြီးတွင် လူတစ်ယောက်လျော့သွားရုံနှင့် ကမ္ဘာကြီးအတွက် ဘာမှဖြစ်မသွားဟုပြောလျှင် အဓိပ္ပါယ်မဲ့ရာကျမည်။ လူတစ်ယောက် ရှိခြင်းမရှိခြင်းအတွက် ကမ္ဘာ့လူသားတို့က ၀မ်းသာဝမ်းနည်း ဖြစ်ရသည်ကပင်ထိုသူ၏တန်ဖိုးဟု ဆိုရမည်ထင်သည်။ လူ့တန်ဖိုးကို လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည့်ကာလ အတွင်း သူဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုသည့်ပေတံနှင့်ယှဉ်၍စဉ်းစားကြသည်။ ကိုယ်နေထိုင်ခဲ့သည့်ဘ၀တစ်လျောက် မိမိအတွက်လည်းအကျိုးမရှိ၊အများအတွက်လည်းအကျိုး မဖြစ်ထွန်းဘဲ အမှိုက်သာသာဘ၀များလည်းရှိသည်။ ထို့အတွက် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက တတ်နိုင်သမျှလှည်းကျင်းထုတ်စေချင်ကြသည်။ အများအတွက်တော့ အကျိုးမရှိ၊ ကိုယ့်အတွက်သာ အကျိုးရှိသည့် လူဖြစ်ရုံ ဘ၀မျိုးလည်းရှိသည်။သူတို့အတွက်တော့ ပြောစရာများများမရှိ။ သူတို့ ရှိနေ၍လည်းဘာမျှ ၀န်ထုပ်မဖြစ်၊ မရှိတော့၍လည်း တသစရာမရှိ၊ ဘာသိဘာသာပင်။
မိမိအတွက်သာမက သူ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါ ငှက်တစ်သောင်း နားခိုနိုင်သော အရိပ်အာဝါသ ပေးစွမ်းနိုင်သည့် သစ်တစ်ပင်ကောင်းလိုလူတစ်ချို့လည်းရှိသည်။ သူတို့ကိုတော့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက လိုလားကြ တောင့်တကြမည်။ သူတို့တစ်ယောက် လျော့သွားလျှင် နာကျင်ရသည်။ အစားထိုးဖို့အချိန်စောင့်ရတတ်သည်။ သူတို့လိုလူမျိုးသည် မရှိမဖြစ်ဆိုသည်ထက် ရှိလျင်ပိုကောင်းသည့် လူများဖြစ်ကြသည်။သူတို့ကြောင့် လောကကြီးသာယာ၏။ ကြီးပွားတိုးတက်၏။ သူတို့၏ ကျိုးစားအားထုတ်မှုများက သူ့တစ်ဦးတည်းတွင်သာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်မဟုတ်။ သူ့ကိုမှီလျက် သူ့လောကသည်လည်း အကျိုးခံစားရသည်။
အဆိုတော် ထူးအိမ်သင် ဆုံးသွားသည်။ သူ့အသံချိုချိုနှင့် အနှစ်သာရရှိသည့် ဂီတ စကားလုံးများထပ်မကြားနိုင်တော့ပြီ။
ဆရာကြီးပါရဂူ ဆုံးသွားသည်။ သူရေးသော ဟန္ဒီဘာသာပြန်များနောက်ထပ်မဖတ်နိုင်တော့ပြီ။
ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်း ဆုံးသွားသည်။ သူ၏ ရဲရင့်သော သမိုင်းသုံးသပ်ချက်များ မဖတ်ရတော့ပြီ။
ဆရာကြီးလူထုစိန်ဝင်းဆုံးပါးသွားခဲ့သည်။ လူငယ်တို့အတွက် ခပ်စပ်စပ်လေးဆုံးမတတ်သည့် သူ၏ဆောင်းပါးများမဖတ်နိုင်တော့ပြီ။
နောက်ထပ်ကျွန်တော်အလွန်ကြည်ညိုသည့် ဆရာကြီး ဆရာမကြီးများကျန်နေသေးသည်။ သူတို့လည်း အသက် ၈၀၊ ၉၀ဇရာကိုမလွန်ဆန်နိုင်တော့ပြီ။ ဒါပေမယ့်အသိမကြွယ်သည့် ကလေးငယ်က မဖြစ်နိုင်တာကိုတောင့်တမိသလိုမျိုး သူတို့ကို ကျွန်တော် မတိမ်းပါးစေချင်သေး။ သူတို့ရှိနေသေးသည်ကိုသိရလျှင်စိတ်ချမ်းသာသည်။ ကျွန်တော့်အတွက်တန်ဖိုးရှိ သည့်လူများဖြစ်နေ၍ပင်။
မိတ်တွေတို့ရော မသေစေချင်သေးသည့် သူများရှိတယ်မဟုတ်လား။
သေစေချင်သည့် သူများကော . . .?
Posted by နည်ရဲဇော် at 8:59 PM No comments: Links to this post
Posted by နည်ရဲဇော် at 2:34 AM No comments: Links to this post
``ကျောင်းဆင်းပြီးလည်းကျွန်တော်ဆက်နေလို့ရပါတယ်``ဆရာဟားဘတ်ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ ``ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ကိုကြိမ်နဲ့ရိုက်ပြီးကျောင်းစောစောဆင်းပေးစေချင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဖေကကျောင်းကအပြန်နှစ်နာရီနောက်ကျလို့ ကျွန်တော့်ကိုကြိမ်နဲ့စော်မှာပဲ။
``မင်းကကြိမ်နဲ့ရိုက်ရမယ့်အရွယ်မဟုတ်တော့ဘူး´´ဆရာဟားဘတ်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ``ဒါပေမယ့် မင်းကိုအဲဒီချယ်ရီပင်ကို သွားတက်တဲ့အတွက် ဒဏ်တော့ပေးမှရမယ်။ မင်းတို့ကောင်လေးတွေပိုသိပါတယ်။ တခြားငါးယောက်ကတော့ တစ်ယောက်တစ်ဒေါ်လာပေးပြီးပြီ။ မင်းတစ်ယောက်ပဲ အဲဒီအပင်ဖိုးလျော်ဖို့ကျန်တော့တယ်။ မင်းကွာ တစ်ဒေါ်လာလေးတောင် ချေးလို့မရဘူးလား။``
``ဟင့်အင်း``ကျွန်တော်ဖြေလိုက်သည်။ ``ကျွန်တော်ပြစ်ဒဏ်ပဲခံမယ်။ ခပ်မြန်မြန်ပြစ်ဒဏ်မျိုးဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်။ ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူး`` ဆရာဟားဘတ်ကကျွန်တော့်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်။ ဆရာကလူကောင်ကြီးသူဖြစ်သည်။
မီးခိုးရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားသည်။ သူ့ဝတ်စုံက သူ့ဆံပင်ဖြူတွေနှင့်လိုက်ဖက်လှသည်။
``ဆရာကျွန်တော့်အဖေအကြောင်းမသိပါဘူး။ သူကရှေးဆန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့အသက်နှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်အထိ သူစကားလိုက်နာရတုန်းပဲ။ သူက ကလေးကိုအလိုလိုက်ရင်ပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့သူပဲ။ သူ့ကို ချယ်ရီပင်ကိစ္စနားလည်အောင်ဘယ်လိုမှရှင်းပြလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်တို့အမျိုးထဲမှာ တစ်ဦးတည်းသောပထမဆုံးအထက်တန်းကျောင်းတက်နိုင်တဲ့သူလေ။
ဆရာက``ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ မင်းပြစ်ဒဏ်ခံမှဖြစ်မယ်။ မင်းဒီနေ့ကျောင်းဆင်းပြီးနှစ်နာရီ၊ မနက်ဖြန်နှစ်နာရီနေရမယ်။ မင်းကို တစ်နာရီကိုနှစ်ဆယ့်ငါးပြားပေးမယ်။ အထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်အတွက်တော့ ဒီပိုက်ဆံဟာတော်တော်များတဲ့ငွေပဲ။ မင်း ကျောင်းကြမ်းပြင်တွေကို တံမြက်စည်းလှည်းရမယ်။ ကြမ်းတိုက်ရမယ်။ ကျောက်သင်ပုန်းတွေကိုသုတ်ရမယ်။ တံခါးပေါက်တွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ်။ မင်းအတွက်ပိုက်ဆံကိုငါစိုက်ပေးမယ်။´´ ဟုပြောသည်။ ဆရာဟားဘတ်ကို ကျွန်တော့်ကို တစ်ဒေါ်လာချေး ဖို့ပြောမထွက်။ သူကလဲဘယ်တုန်းကမှ စကားမဟခဲ့။ ကျောင်းဆင်းချိန် အချိန်ပိုဆက်နေပြီး တစ်နာရီ ၂၅ ပြားနှုန်းနဲ့ ကျောင်းသန့်ရှင်းရေးအဖိုးကြီးကို ၀ိုင်းကူလုပ်ရုံပဲတတ်နိုင်တော့သည်။
ကြမ်းပြင်ကိုတိုက်နေရင်းနဲ့ ``အဖေ ငါ့ကို ဘာများလုပ်မလဲ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ဘယ်လို လိမ်ပြောရပါ့မလဲ``ဘာဖြစ်လို့များ ငါတို့အဲဒီချယ်ရီပင်ကိုသွားတက်မိရ တာပါလိမ့်။ အဲဒီ ပုတ်သင်ညိုနောက်ကို ဘာလို့ တို့ ခြောက်ယောက်သားလိုက်ဖမ်းကြရတာလဲ။ နောက်ပြီး အပင်ကဘာလို့ကျိုးရတာလဲ။ ခြံရှင်အဖိုးကြီး အိဖ် ကရော ဘာလို့အဲဒီအချိန် အပင် အောက်ရောက်နေရတာလဲ။ ´´ ဟုတောင်စဉ်ရေမရတွေးနေမိသည်။
ကျောင်းကပြန်တော့ ညနေခြောက်နာရီထိုးနေပြီ။ အိမ်ရောက်အောင်ခြောက်မိုင်လောက် လမ်းလျှောက်ရဦးမည်။ အိမ်ရောက်တဲ့အချိန်ကျ ၇ နာရီကျော်နေလိမ့်မည်။ အိမ်ရောက်လျှင် လုပ်စရာ အလုပ်တွေကတစ်ပုံကြီး။ အဖေနဲ့အတူတူ နွားမခုနှစ်ကောင် နို့ညှစ်ရဦးမည်။ ကျွဲတွေနွား ဆယ်ကိုးကောင်၊ လားက လေးကောင်၊ ၀က် နှစ်ဆယ့်ငါးကောင် အစာကျွေးရဦးမည်။ မီးဖိုအတွက် ထင်းတွေခွဲရဦးမည်။ ပြီးတော့ ရေတွင်းကရေခပ်ရဦးမည်။ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန် အဖေလုပ်လက်စတန်းလန်းဖြစ်နေလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်နောက်ကျနေတဲ့အကြောင်းတွေးပြီး အဖေတော့ ဒေါသပုန်ထနေတော့မည်။
ကျွန်တော် ညမှောင်မှောင်အောက် ရိုးတံပြိုင်းပြိုင်းနှင့်သစ်ပင်တွေကြားထဲမှ အိမ်ကိုအပြေးပြန်လာခဲ့သည်။ တောင်ကုန်းပေါ်ပြေးတက်လိုက်ဆင်းလိုက် နှင့် အမြန်သွားမှဖြစ်မည်။မြေကြီး က အေးစိမ့်နေသည်။ ကျွန်တော်တို့ နွားကျောင်းရာစားကျက်သို့သွားသည့် ခင်တန်းရှည်ရှည်သို့ရောက်လာသည်။ လေက မျက်နှာပေါ်ရှိချွေးတို့ကို ခြောက်သွေ့သွားစေသည်။ စားကျက်ကိုဖြတ်လျက် အိမ်ဆီသို့အပြေးနှင်လေတော့သည်။ စာအုပ်တွေကိုကဗျာကယာ ပစ်ချရင်း စပါးကျီသို့ နွားစာကျွေးဖို့ပြေးလာခဲ့သည်။ ကျောင်းဝတ်စုံကို အလုပ်ကြမ်းဝတ်စုံအဟောင်းနှင့်လဲဖို့အချိန်မရ။နွားစာတွေကိုမြေပြင်မှာဖွနေသည့်အဖေ့ကိုတွေ့ရသည်။ ဒါကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေ။ ကျွန်တော်ပြေးသွားပြီး ``ထားလိုက်အဖေ။ ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်။ ကျွန်တော်နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်``ဟုပြောလိုက်သည်။ ``ငါမြင်သားပဲ´´အဖေကျွန်တော့်ဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ သူ့မျက်လုံးမှာဒေါသမီးတောက်နေသည်။ ``မင်းကဘာလို့ဒီလောက်နောက်ကျရတာလဲ။ ဒီအလုပ်တွေငါ့ကိုဘာလို့မကူရတာလဲ။ တစ်မိပေါက်တစ်ယောက်ထွန်းဖြစ်အောင်ကျောင်းထားပေးတာ ဒီလိုပြန်ကျေးဇူးဆပ်တာလား။´´ ကျွန်တော်ဘာမှပြန်ပြော။ ကျောင်းနောက်ကျရတဲ့အကြောင်းပြောပြချင်စိတ်လည်းမရှိပေ။ အဖေကနွားစာတွေဖြန့်တာရပ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ရင်း ``မင်းဒီလိုအချိန်ကျမှဘာလို့ရောက်လာတာလဲ။ ပြောရင်ပြော။မပြောလို့ကတော့ ဒီမှာတင် ထင်းတုံးနဲ့အတီးခံရမယ်။´´ ဟုကြိမ်းဝါးတော့သည်။
``ကျွန်တော်ကျောင်းနောက်ကျမှဆင်းရတယ်´´ကျွန်တော် အဖေ့ကိုလိမ်လို့မဖြစ်။ သူမနက်ဖြန် ကျောင်းကိုသွားပြီး ကျွန်တော်ကျောင်းနောက်ကျမှ ဆင်းရသည့် အကြောင်းစုံစမ်းလိမ့်မည်။ လိမ်ပြောလိုက်မှပိုဆိုးသွားလိမ့်မည်။ ``ကျွန်တော်တို့ ဇီဝဗေဒအချိန်မှာ ပြင်ပလေ့လာရေးသွားရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ယောက်ျားလေးခြောက်ယောက်ကြောင့် ချယ်ရီပင်တစ်ပင်ကျိုးသွားတယ်။ အဲဒီအပင်အတွက် တစ်ယောက်တစ်ဒေါ်လာစီလျော်ပေးရတယ်။ ကျွန်တော့်မှာတစ်ဒေါ်လာမရှိဘူးလေ။ ဆရာဟားဘတ်ကကျွန်တော့်ကိုအလုပ်ခိုင်းတယ်။ တစ်နာရီ ၂၅ ပြားနှုန်းနဲ့။ ဒီညနေကျွန်တော်နေရတယ်။ မနက်ဖန်ညနေလည်းနေရဦးမယ်။ ``
``ငါသွားကိုကြည့်ဦးမှာ။ ´´``နေပါဦး။ မင်းတို့က ဘယ်သူ့အပင်သွားချိုးပစ်လိုက်ရတာလဲ´´
အဖေကမေးသည်။``အိဖ်ရဲ့လယ်ကွင်းမှာ မင်းတို့ကဘာသွားလုပ်တာလဲ။ သူနေတာက ကျောင်းရဲ့ ဟိုး လေးမိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာ။ မင်းတို့ကျောင်းမှာ စာအုပ်တွေနဲ့မသင်ရဘူးလား။ သူတို့က မင်းတို့ကို ဒီအတိုင်းတောင်ကုန်းတွေသွားတက်ဖို့ လွှတ်ထားတာပဲလား။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ မင်းကိုအိမ်မှာပဲထားတော့မယ် ဒေ့ဗ်။ မင်းအတွက်အလုပ်တွေဒီမှာအများကြီးပဲ။`
``အဖေ။ နွေဦးရာသီကရောက်နေပြီ။ ကျောင်းမှာ ပိုးကောင်တွေ၊ မြွှေတွေ၊ ဖားတွေ၊ ပုတ်သင်ညိုတွေနဲ့ အပင်တွေကိုလေ့လာရတဲ့ဘာသာတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါ ဇီဝဗေဒပဲ။ အဲဒီနေ့ကနေသာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အကောင်တွေထွက်ရှာရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေး ခြောက်ယောက် ပုတ်သင်ညို တစ်ကောင်ကို ချယ်ရီပင်ပေါ်မှာ တပြိုင်တည်းတွေ့လိုက်ကြတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့လည်း အပင်ပေါ်အားလုံးတက်ဖမ်းကြတယ်။ အပင်က ခွဆုံကနေကျိုးသွားတယ်။ ဘကြီးအိဖ်က ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ ထယ်ထိုးနေတာ။´´
``သြော်..သူဆင်းရဲသားပေါ့။ ဟုတ်လား။ မနက်ဖြန်ကျမှငါဒီကိစ္စရှင်းမယ်။ သူက ဒီနယ်သားလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့။ မနက်ဖြန်ကျမှ ငါသူ့ကိုသွားကိုရှင်းဦးမယ်။ စာအုပ်တွေကျတော့ပစ်ထားပြီး တောင်ကုန်းပေါ်မှာလျှောက်ဆော့နေဖို့ လွှတ်ထားတယ်ပေါ့။ ဘယ်လိုကျောင်းမျိုးလဲကွာ။ ´´
``မသွားပါနဲ့အဖေရယ်။ သားဖာသာသား ပြားငါးဆယ်ရအောင်လုပ်ပြီးဒဏ်ငွေပေးပါရစေ။ အဖေ့ကိုကျောင်း မသွားစေချင်ဘူး။ ဆရာဟားဘတ်နဲ့ပြဿနာမဖြစ်စေချင်ဘူး။ ´´
``ဒီကိစ္စငါကိုယ်တိုင်ရှင်းရမယ်။ မင်းဆရာဟားဘတ်နဲ့လည်းရှင်းရမယ်။ တခြားကလေးတွေကျတော့ပိုက်ဆံရှိလို့လွှတ်ပေးပြီး မင်းကျတော့အလုပ်ခိုင်းရတယ်လို့။ သူ့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ ငါကဆင်းရဲသားပါ။ သေနတ်ကျည်ဆံကတော့ ဆရာကောဘာကောညှာမှာမဟုတ်ဘူး။ ဆင်းရဲသားလဲကျည်ဆံမှန်ရင်သေမှာပဲ။ သူဌေးလဲသေမှာပဲ။ ကဲလာ မင်းကျောကိုလျော်ထုံးနဲ့အရိုက်မခံရခင် အလုပ်လာလုပ်´´
စပါးကျီရဲ့အပေါ် တောအုပ်လေးကိုဖြတ်ပြီး ဝေးနိုင်သမျှဝေးဝေးပြေးမလားဟု ကျွန်တော် စဉ်းစားမိသည်။ ကျောင်းနဲ့အိမ်ကနေတခါတည်းထွက်ပြေးလိုက်မည်။ အဖေလိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဖေနဲ့တော့ ကျောင်းကိုပြန်မသွားနိုင်ဘူး။ သူသေနတ်ယူသွားပြီး ဆရာ့ကို ပစ်ရင်ပစ်လိမ့်မည်။ သူဘာလုပ်မလဲ ပြောဖို့ခက်သည်။ အဖေ့ကို သူတို့ခေတ်တုံးကလိုမဟုတ်ဘဲ ဒီနယ်ကလေးမှာ ကျောင်းတွေက အများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီလို့ ရှင်းပြရင်လဲ သူနားလည်မှာမဟုတ်။ ကျွန်တော်တို့ မြွှေတွေဖားတွေ၊ ပုတ်သင်ညိုတွေ၊ အကောင်တွေ အပင်တွေ လေ့လာရတယ်ဆိုတာပြောပြလဲ သူနားလည်မှာမဟုတ်ပေ။ အိမ်ကထွက်ပြေးရင်လဲ ထူးမှာမဟုတ်ဘူး။ အဖေကတော့ ဆရာနဲ့သွားတွေ့မှာပဲ။ ဆရာဟားဘတ်နဲ့ကျောင်းကလုပ်လို့ ကျွန်တော်အိမ်ကထွက်ပြေးတယ်လို့တောင် သူကထင်ဦးမယ်။ မထူးပါဘူး။ အိမ်မှာနေပြီး နွားစာပြီးအောင်ကျွေး၊ နောက်တစ်နေ့ အဖေနဲ့ကျောင်းကိုသွားဖို့ပဲရှိတော့တယ်။
အေးမြတဲ့မတ်လကောင်းကင်မှာ လကထိန်ထိန်သာနေသည်။ လရောင်နှင့်ကျွန်တော်အလုပ်ပြီးသွားသည်။ ဆရာဟားဘတ်ကတော့ ကျွန်တော်အိမ်မှာဘယ်လောက်အလုပ်ကြမ်းလုပ်ရသည်ကို တကယ်မသိရှာ။ သူသာသိရင်တော့ ကျွန်တော့်ကိုကျောင်းမှာ ခိုင်းမည်မဟုတ်။ လျော်ကြေးပေးဖို့ တစ်ဒေါ်လာသူထုတ်ချေးမှာပါပဲ။ သူက ဒီတောပိုင်းမှာဘယ်တုန်းကမှနေခဲ့ဘူးသူမဟုတ်ဘူးလေ။ တောက ကလေးတွေကျောင်းတက်နိုင်ဖို့အတွက် အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့။ အခုတော့ သူ လယ်ထဲရွာထဲက ကလေးတွေကျောင်းလာတက်တဲ့ ကျေးလက်စာသင်ကျောင်းကလေးမှာ ဆရာလုပ်နေရပြီ။
အလုပ်တွေပြီးသွားတော့ ကျွန်တော်အိမ်ထဲဝင်ပြီး ညစာစားလိုက်သည်။ အဖေနဲ့အမေက စားနှင့်ပြီ။ ညစာကား အေးစက်၍ပင်နေပြီ။ အဖေနဲ့အမေ အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ စကားပြောနေသံကြားရသည်။ အဖေက ကျွန်တော် ကျောင်းပြန်နောက်ကျတဲ့ အကြောင်း အမေ့ကိုပြောနေတာပင်။
``ငါ့မှာတော့ နွားတွေနို့ညှစ်ရတယ်။ ထင်းတွေတစ်ယောက်ထဲ ခွဲရတယ်။ တစ်နေကုန် လယ်ထဲမှာလုပ်ခဲ့ရသေးတယ်။ မနက်ဖန်တစ်ရက်တော့ နားလိုက်ဦးမယ်။ အဲဒီကျောင်းကိုသွားပြီး ဒီကိစ္စကို ရှင်းနိုင်မလားကြည့်ရမယ်။ ငါက ကျောင်းဆရာဟားဘတ်အတွက်တော့ စာတတ်ပေတတ်တစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့။ သူ့ကို မှတ်သွားအောင်တော့ သင်ခန်းစာတစ်ခုပေးရမယ်။ ´´
အမေကပြောသည်။ ``လပ်စတာရယ်။ သွားမလုပ်ပါနဲ့။ ပြဿနာမရှာဘဲ အေးအေးနေစမ်းပါ။ ရှင်ဒီလိုလုပ်ရင် အချုပ်ထဲအထည့်ခံ ရမှာပေါ့။ ဥပဒေကနေမှာမဟုတ်ဘူး။
ရှင်ကျောင်းကိုသွားပြီး တခြားကျောင်းသားတွေရဲ့ရှေ့မှာ ကိုယ့်သားကို မျက်နှာငယ်ရအောင်သွားတော့မလုပ်ပါနဲ့.´´
``ဟေ့။ မျက်နှာငယ်တာတွေဘာတွေ ငါမသိဘူး။ သူ ငါဒီမှာလုပ်နေရတာတွေကိုကျတော့ ထည့်မစဉ်းစားဘူး။ ကလေးတစ်ယောက်ကိုကျောင်းမှာ နေခိုင်းပြီး ကျန်တဲ့ကလေးတွေကျတော့ ပြန်ခိုင်းတာ သူ့မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး ဆိုတာပြရမယ်။ ငါ့သားလည်း တခြားကျောင်းသားတွေလောက်တော့ လိမ္မာရေးခြားရှိတာပဲ မဟုတ်လား။ ကျောင်းဆရာကိုလည်း တခြားလူတွေလို ကျည်ဆံကဖောက်သွားမှာပဲ။ ငါ့ကို ဒီလိုမျိုးတော့ ကြောသွားလို့မရဘူး။ မနက် စောစောသွားပြီး ရှင်းရမယ်။ ငါ ဒီ ပိုးကောင်ပညာရေး၊ တောင်ကုန်းတွေပေါ်ပြေးတက်ပြီး ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ ဖား မြွေ ပုတတ်တွေဖမ်းတဲ့ ပညာရေးအကြောင်းပြောရမယ်။´´
ကျွန်တော် ညစာကိုပြီးအောင်စားလိုက်သည်။ အပေါ်ထပ်ကို အသာတက်သွားပြီး မီးအိမ်ထွန်းလိုက်သည်။ အားလုံးကို မေ့ထားကြည့်မိ၏။ ဂျီသြမေတြီ လေ့လာသည်။ ဇီဝဗေဒ သင်ခန်းစာတွေလုပ်သည်။ အဖေ့အကြောင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ ဘာကိုမှ လေ့လာလို့မရ။ မနက်ကျရင် သူ ကျွန်တော်နှင့်ကျောင်းကိုသွားလိမ့်မည်။ သူ သေနတ်တစ်လက်ယူသွားလိမ့်မည်။ ဆရာ ဟားဘတ်ကတော့ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုထင်မည်မသိ။ အဖေပြန်သွားမှ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြရမည်။ ဒါပေမယ့် အဖေက သူ့ကို သေနတ်နှင့် ပစ်ရင်ပစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော် အဖေနှင့်သွားရမှာ ခါးခါးသီးသီးဖြစ်မိသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း မနက်ကျရင် အဖေ သွေးအေးသွားပြီး မသွားဘဲ နေချင်လဲနေမှာပါ။
မနက်လေးနာရီထိုးတော့ အဖေထပြီ။ သူမီးဖိုထဲမှာ မီးမွှေးသည်။ ပြီးတော့ မီးလင်းဖို ဖိုသည်။ အမေ့ကိုနှိုးပြီး မနက်စာပြင်ခိုင်းသည်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုနှိုးပြီး နွားစာကျွေး နွားနို့ညှစ် ကူခိုင်းသည်။ ကျွန်တော်တို့ စပါးကျီထဲမှာ အလုပ်တွေပြီးချိန်ရောက်တော့ အမေကမနက်စာပြင်ပြီးနေပြီ။ မနက်စာစားကြသည်။ နေ့အလင်းရောင်ပေါ်ထွက်လာကာ ၀က်သစ်ချပင်ကြီးတွေ ကိုနှင်းဖြူဖြူတွေဖုံးလွှမ်းနေတာတွေ့ရသည်။ တောင်ယာတစ်ခုလုံးနှင်းတွေဖြင့် ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေသည်။ အေးစိမ့်သည့်လေက တိုက်နေပြန်သည်။ ကောင်းကင်က ကြည်လင်နေသည်။ မကြာခင် နေထွက်လာကာ နှင်းတွေအရည်ပျော်စေတော့မည်။ နေ့ခင်းကျရင် နေရောင်ကြောင့် နွေးလာပြီး ရေခဲနေသည့်မြေပြင်လည်း ပျော်ဆင်းလာလိမ့်မည်။ တောင်ယာထဲမှာ ရွှံ့တွေနှင့်ပြန်ဖြစ်ဦးတော့မည်။ တောင်စောင်းတွေက ရေစီးကြောင်းလေးတွေအတိုင်း ရွှံ့နှစ်ရေတွေ စီးကျပေဦးတော့မည်။
"ကဲ ဒေ့ဖ်။ ကျောင်းသွားဖို့ပြင်တော့။ မင်းနဲ့ငါ ကျောင်းလိုက်ပြီး ဒီပိုးကောင် ဖား၊ မြွေ၊ ပုတတ် ပညာရေးအကြောင်း လိုက်ကြည့်မယ်။ ဒီလို အရူးအနှမ်းပညာရေးကို ငါလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ "
အဖေက လုံးဝသတိမမေ့။ သူ့ကို ကျောင်းကိုခေါ်သွားရတော့မည်။ ကျွန်တော်တို့ မနက်စောစောသွားကြသည်။ မနက်စောစောသွားရတာကိုပဲ နည်းနည်းတော့ ၀မ်းသာသည်။ အဖေက ဆရာဟားဘတ်ကို
သေနတ်ထုတ်ခြိမ်းခြောက်ချိန်မှာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ သိပ်များများတွေ့မှာမဟုတ်။ အဖေ ကျောင်းနှင့်စိမ်းနေမှာ သေချာသည်။ အဖေက အပေါ်အောက်တဆက်တည်း အလုပ်ကြမ်းဘောင်းဘီ နှင့် ဘွတ်ဖိနပ်အကြီးကြီးဝတ်ထားသည်။ အပေါ်က ရှပ်အပြာနှင့် သိုးရေကုတ်အင်္ကျီထပ်ဝတ်ပြီး ခေါင်းမှာ ဦးထုပ်အနက်ကြီးတစ်လုံး ခပ်ငိုက်ငိုက်ဆောင်းလိုက်သည်။ သေနတ်ကိုခါးမှာချိတ်ထားသည်။ တောင်ကုန်းကိုဖြတ်လျက် ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းဆီသို့ ချီတက်ကြတော့သည်။
ကျောင်းကိုရောက်တော့ စောနေသေးသည်။ ဆရာဟားဘတ်လည်းရောက်နှင့်ရုံရှိသေးသည်။ ကျောင်းဆောင် လှေခါးထစ်များတစ်လျောက်လှမ်းတက်ရင်းတွေးနေမိသည်။ "ဆရာဟားဘတ်က လူကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာ
အဖေသဘောပေါက်သွားမှာပါ။ သူ့ကိုမသိသေးလို့ပါ။ ကျွန်တော်နဲ့ သူငယ်ချင်းလမ်းဘတ်တို့လိုပေါ့။ ကျွန်တော်တို့မသိသေးခင်က လမ်းဘတ်ကိုကြည့်မရခဲ့ဘူး။ တကယ်စကားပြောကြည့်မှ ခင်သွားတယ်လေ။ ဒီလိုမျိုးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သိဖို့အရေးကြီးတယ်။
"ဟုတ်ပါတယ်။ အင်း ခင်ဗျားက ဒေဖ့် အဖေပေါ့"
"ဟုတ်တယ်" ဟုပြောပြီး သူ့သေနတ်ကြီးကိုဆွဲထုတ်ကာ ဆရာဟားဘတ်ရဲ့ ရုံးထဲက ခုံတစ်လုံးပေါ် တင်ထားလိုက်သည်။ အဖေ့သေနတ်ကြီးမြင်တော့ အနက်ရောင်မျက်မှန်ကိုင်း နောက်ကွယ်က ဆရာဟားဘတ်ရဲ့ မျက်လုံးအစုံပြူးသွားသည်။ ဖြူဖျော့ဖျော့သူ့ပါးမှာ သွေးရောင်လွှမ်း လာသည်။
အဖေက " ဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ သိချင်တာလေးနည်းနည်းပါးပါးရှိလို့ပါ။ ကျုပ်က ကျုပ်သားဒေ့ဖ်ကို ပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်လို့ကျောင်းထားတယ်။ ကျောင်းထားလိုက်တဲ့ ကျုပ်သားသမီး ဆယ့်တစ်ယောက်ထဲမှာလည်း
သူတစ်ယောက်ထဲပဲ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်ရှိတယ်။ အခုတော့ သူကျောင်းကနောက်ကျမှပြန်လာပြီး အလုပ်တွေကျုပ်ချည်းပဲ လုပ်ရဖို့ ပစ်ထားတယ်။ ကျုပ်သားကပြောတော့ သူတို့အကုန်လုံး မနေ့က အကောင်တွေလိုက်ဖမ်းပြီး ချယ်ရီပင်တစ်ပင် ချိုးလာခဲ့တယ်တဲ့။ အလျော်ပေးဖို့ ကျောင်းကနှစ်နာရီနောက်ကျဆင်းပြီး အလုပ်လုပ်ပြီးမှ ပြန်လာခဲ့ရတယ်တဲ့။ ဒါအမှန်ပဲလား" ဟုမေးလိုက်သည်။
ဆရာက အဖေ့သေနတ်ကို တစ်ချက်ကြည့်ရင်း "အဲ . . . ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ" ဟုပြောလိုက်သည်။
"အော်. . . ဒါဆိုဒါက စာသင်ကျောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဖား ကျောင်း။ ပုတတ်ကျောင်း။ မြွေကျောင်းပေါ့။ အထက်တန်းကျောင်းဘယ်နည်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့။"
" ဒီအပေါက်သေးသေးလေးတွေ့တယ်မဟုတ်လား။ " သေနတ်ကိုကောက်ကိုင်ကာ ပြောင်းဝကို လက်ညှိုးတင်ပြီးပြောပြန်သည်။ " ဒီအပေါက်ကနေ ကျည်ဆံထွက်လာပြီဆိုရင် ကျောင်းဆရာကိုလည်း တခြားလူတွေလိုပဲ
သေအောင်သတ်နိုင်တယ်။ ချမ်းသာတဲ့လူရော ဆင်းရဲတဲ့လူရော သေအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်ခင်ဗျားကို တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဒီကောင်သုံးဖို့ မလိုဘူးဆိုဒါ ကျုပ်သိတယ်။ ဟောဒီ ပဲခွပ် နဲ့တင်လုံလောက်တယ်။"
ညိုမှောင်သောအသားအရည်၊ ကြံ့ခိုင်တောင့်တင်းသည့်ကိုယ်ခန္ဓာ နှင့်အဖေသည် ဆရာဟားဘတ် နားမားမားကြီးရပ်နေသည်။ အဖေ့ကိုဒီလောက်ထိ ကြီးမားကြံ့ခိုင်လိမ့်မည်ဟုအရင်က မသိခဲ့။ အဖေ့ကို ကျောင်းပရ၀ုဏ်ထဲမှာ
ဘယ်တုန်းကမှ မမြင်ဖူးခဲ့။ ဆရာ ဟားဘတ်ကိုတော့ အမြဲမြင်နေရသည်။ ကျွန်တော့်အရှေ့မှာတော့ ဆရာသည် အကောင်ကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ အဖေနှင့်ယှဉ်လိုက်တော့ ဆရာသည် လူကောင်ကြီးသည်မထင်ရတော့။
ဆရာက " ကျွန်တော်က တာဝန်အရလုပ်ရတာပါ မစ္စတာ ဆက်တန်။ အထက်က ချမှတ်ထားတဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတိုင်း သင်ရတာပါ။"
"သင်ရိုးညွှန်းတမ်း. . . ဟုတ်လား။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းလဲ။ အကောင်ဗလောင် ပိုးမွှား လေ့လာတဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းလား။ ကလေးတွေကို တောထဲခေါ်သွားပြီး သူတို့ရဲ့ မိဘတွေကျတော့ သူတို့ပညာရေးအတွက်၊ ကျောင်းထားနိုင်ဖို့ ကျွန်လို
ရုန်းနေရတယ်။ ကောင်လေးတွေနဲ့ကောင်မလေးတွေ အဲဒီလို အတူတူလွှတ်လိုက်တာ အရမ်းအန္တရာယ် များတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားမသိဘူးလား။"
ထိုအချိန်တွင် ကျောင်းသို့ ကျောင်းသားများရောက်လာနေကြသည်။
"တခြားလူတွေမကြားအောင် တခါးပိတ်လိုက်ပါ ဒေ့ဖ်ရယ်" ဆရာကပြောသည်။ ကျွန်တော် တံခါးဆီသို့လျောက်သွားပြီး ပိတ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး လေထဲကသစ်ရွက်လို တုန်ယင်နေသည်။ အဖေ ဘယ်တော့များ ဆရာ့ကို
ရိုက်လိုက်မလဲ စိုးရိမ်နေမိသည်။ သူကချည်း ပြောနေသည်။ အဖေ့မျက်နှာ နီမြန်းလာသည်။ နေပူမိုးရွာဒဏ်ခံထားရသည့် သူ့မျက်နှာညိုမှောင်မှောင်ဆီမှဖြစ်သည်။
"ကျွန်တော် ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။ သူတို့ ဘာလုပ်လဲ၊ ဘာမလုပ်ဘူးလဲ ဆိုတာ ကျွန်တ်ာအကုန်သိပါတယ်။ ဒီလေ့လာရေးခရီးမှာ တခြားဆရာတစ်ယောက်နဲ့ သူတို့ကိုမထည့်လိုက်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်သွားတာပါ။ ယောက်ျားကလေးတွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေခေါ်သွားတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဘာလို့မခေါ်သွားရမှာလဲ"
"ကျုပ်အမြင်ကတော့ လုံးဝမသင့်တော်ဘူးဗျာ။ ဒီမြီးကောင်ပေါက်တွေတပြုံတမကြီး တရုန်းရုန်းနဲ့လျှောက်သွား၊ ချယ်ရီပင်တွေ လျှောက်ချိုး။ ပြီး ကောင်လေးတွေကို ကျောင်းမဆင်းခိုင်းနဲ့။"
"ကျွန်တော် တခြားဘာများလုပ်ပေးနိုင်မှာမို့လို့လဲ မစ္စတာ ဆက်တန်ရယ်။ ကောင်လေးတွေအားလုံး ချယ်ရီပင်တစ်ပင်ထဲကို ၀ိုင်းတက်စရာမှမလိုတာ။ တစ်ယောက်ယောက်တက်ဖမ်းလိုက်ရင်ရတဲ့ဟာ။ ခြံပိုင်ရှင်က
ခြောက်ဒေါ်လာအလျော်တောင်းတယ်။ နည်းနည်းတော့ များတယ်ထင်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ လျော်ပေးရမှာပဲ။ ကလေး ငါးယောက်တော့ ပေးခိုင်းပြီးတော့ ကျန်တစ်ယောက်ကို လွှတ်ပေးလိုက်ရမှာလား။ သူက တစ်ဒေါ်လာမရှိဘူး။ ရှာလို့လည်းမရဘူးလို့ပြောတယ်လေ။ ကျွန်တော် သူ့ကို ကျောင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ခိုင်းပြီးအလျော်ပေးခိုင်းတာ။ ကျွန်တော့် အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလေ။"
"ခင်ဗျားဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲကျုပ်မသိဘူး။ ဒီကောင့်ကို ကြိုးနဲ့တုပ်ပြီး ဆော်ရမှာ။"
" သူကတုတ်နဲ့ရိုက်ရမယ့်အရွယ်မဟုတ်တော့ဘူး။ လူကြီးနီးပါးဖြစ်နေပြီ"
"ကျုပ်အတွက်တော့ မကြီးသေးဘူး။ သူတို့အသက်နှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်မကျော်သေးသ၍ ကျုပ်အတွက်တော့ မကြီးသေးဘူး။ ရိုက်သင့်ရင်ရိုက်ရမှာပဲ။ ကျုပ်ကမတရားဘူးထင်လို့ပါ။ တစ်ယောက်ကျတော့ အလုပ်လုပ်ရပြီး ကျန်တဲ့ငါးယောက်ကတော့ ပိုက်ဆံရှိလို့ လွှတ်လိုက်ရတယ်လို့။ တရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ကျောင်းနဲ့ ဘာဆိ်ုင်လို့လဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူး။ ကျုပ်အတွက်တော့ ဘာမှ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။"
အဖေသူ့သေနတ်ကိုကောက်ကိုင်လိုက်ပြီး သေနတ်အိတ်ထဲပြန်ထည့်ထားလိုက်သည်။ ဆရာ ဟားဘတ်မျက်နှာပေါ်က အနီရောင်သည်လည်း ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီ။ အဖေ နည်းနည်းတော့ ပျော့ပျောင်းလာသည်။ အဖေ့ကို
ကျောင်းအဆောက်အအုံထဲမှာမြင်ရသည်မှာ အနည်းငယ် ရယ်စရာကောင်းတော့သည်။ သူ့အဖို့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကျောင်းကိုရောက်ဖူးခြင်းပင်။
"ကျွန်တော်တို့ ဖားတွေ၊ မြွေတွေ၊ လိပ်ပြာတွေ၊ ပုတ်သင်ညိုတွေ သာဖမ်းရုံသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး မစ္စတာ ဆက်တန်။ ကျွန်တော်တို့ မြက်ရိုင်းခြောက်တွေကို ပိုးမွေးခန်းထဲထည့်ပြီး ပရိုတိုဇွာ တွေမွေးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။"
"ကျွန်တော် အဲဒါဘာလဲ မသိဘူး။ ပိုးမွေးခန်းဆိုတာ လှည့်ဖြားပြီး ကြက်မတွေကိုသားပေါက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်မျိုးပဲ။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ အကောင်မျိုးတော့ သိပ်မသိဘူး။"
"မစ္စတာ ဆက်တန် လေထဲက ရောဂါပိုးမွှားတွေအကြောင်း ကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်"
"ကျွန်တော့်ကို အပန်းမကြီးရင် လက်စတာ လို့ပဲခေါ်ပါဗျာ။" အဖေက သက်တောင့်သက်သာပုံစံဖြင့်ပြောလိုက်သည်။
"ကောင်းပါပြီ လက်စတာ။ ရောဂါပိုးတွေအကြောင်း ကြားဖူးတယ်မဟုတ်လား"
"အင်း။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အဲဒီ ပိုးမွှားတွေကိုမယုံဘူးဗျာ။ ကျွန်တော် အသက်ခြောက်ဆယ့်ငါးနှစ်ရှိပြီ။ ရောဂါပိုးမွှားတစ်ကောင်မှမမြင်ဖူးသေးဘူး"
"သူတို့ကို သာမာန်မျက်လုံးနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဗျ။ ကဲပါဗျာ။ ခင်ဗျား သေနတ်ကြီးသိမ်းထားပြီး ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့ ကျောင်းမှာနေကြည့်ပါလာ။ ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် ပြစရာတစ်ချို့ရှိတယ်။ ခင်ဗျားသွားပေါ်က ချိုးတွေမှာ ပိုးမွှားတွေရှိတယ်။"
"ဘယ်လို... ကျွန်တော့်သွားမှာရောဂါပိုးတွေရှိတယ် ဟုတ်လား"
" ဟုတ်တယ်။ မြွေမည်းတစ်ကောင်ကို ခွဲစိပ်လေ့လာကြည့်ရင် တွေ့ရမယ့် ပိုးနဲ့ အတူတူပဲပေါ့"
"ခင်ဗျားစကားကို အငြင်းမပွားလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တော့မယုံဘူးဗျာ"
"ကျွန်တော်နဲ့ဒီနေ့နေလိုက်။ ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်ပြမယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခင်ဗျားကို ကျောင်းထဲလိုက်ပြချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကျောင်းတက်တဲ့ခေတ်နဲ့ အခုခေတ် အတော်ကို ကွာသွားပြီဗျ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက အထက်တန်းကျောင်းရှိဦးမယ်မထင်ဘူးနော်။"
"ဟင့်အင်း။ အရေး၊ အဖတ်၊ အတွက်အချက် ဒီလောက်ပဲ။ ဒီလို အကောင်ဗလောင်တွေလေ့လာ၊ ပိုးမွှားတွေကို သွားတွေ၊ မြွေနက်တွေမှာ လိုက်ရှာတာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။ အင်း ကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲသွားပြီပဲ။"
"ဒါပေါ့။ အကောင်းလို့ပဲမျှော်လင့်ရတာပဲ။ ခင်ဗျားသားလို ကလေးတွေက အဲဒီအပြောင်းအလဲထဲပါလိမ့်မယ်။ အခု ခင်ဗျားသား ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံး သူသိတယ်။"
"အေးဗျာ။ ကျွန်တော် ခင်ဗျားနဲ့ဒီနေ့နေမယ်။ ကျုပ်သွားထဲက ပိုးကောင်တွေ မြင်ဖူးချင်တယ်။ ပိုးတစ်ကောင်လောက်တော့မြင်ဖူးချင်တယ်။ ကျုပ်တစ်သက်မှာ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသေးဘူး။ အေးလေ။ လက်တွေ့မြင်ရင်တော့ယုံရမှာပဲပေါ့"
အဖေ ဆရာဟားဘတ်နှင့်ရုံးခန်းထဲက လိုက်ထွက်သွားသည်။ သေနတ်ကျောင်းကိုယူလာလို့ ဆရာဟားဘတ်က အဖေ့ကိုရဲလက်မအပ်ပါစေနှင့်ဟုသာကျွန်တ်ာဆုတောင်းမိသည်။ ပြဿနာတစ်ခုခုဖြေရှင်းရလေ့ရှိတဲ့အခါ သေနတ်ဟာ အဖေ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပါပဲ။
ခေါင်းလောင်းတီးပြီ။ ကျောင်းတက်လေပြီ။ ကျောင်းသားတွေ စာသင်ခန်းထဲတန်းစီသွားရင်း အဖေ့ကိုကြည့်သွားတာ မြင်ရသည်။ သူတို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စလိုက်တွန်းလိုက်ထိုးလိုက်နဲ့။ အဖေကတော့ သူတို့ဖြတ်သွား တာကို တံခါးဝကနေရပ်ကြည့်နေသည်။ ယောက်ျားလေးတစ်တန်းနှင့် မိန်းကလေးတစ်တန်း ရှည်လျားစွာချီတက်လာကြသည်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာဝတ်ဆင်ထားကြသည်။ အဖေက ကျောင်းဝင်းအတွင်း ရိုးတံပြိုင်းပြိုင်းအပင်အောက်မှာ မားမားမတ်မတ်ရပ်နေသည်။ ဆိတ်သားရေကုတ်အင်္ကျီ၊ ဘွတ်ဖိနပ်ကြီးကြီးနှင့် အဖေရဲ့အထက်အောက်တစ်ဆက်တည်း အလုပ်ကြမ်းဘောင်းဘီမှာ ပွယောင်းယောင်းနှင့် ကုတ်အင်္ကျီနှင့်ဖိနပ်ကြားမှာ တွန့်ကြေနေသည်။ သူ့အပြာရောင်အလုပ်ကြမ်းအင်္ကျီကို ကော်လာပဲမြင်ရသည်။ သူရဲ့ ကြီးမားတဲ့ဦးထုပ်မဲအောက်မှာ ဖြူစပြုနေသည့်ဆံပင်ကိုမြင်ရသည်။ မျက်နှာက ခပ်တင်းတင်း။ ရာသီဥတုဒဏ်ခံထားရလို့ နွားစာစဉ်းသည့်ဓါးအရောင်ပေါက်နေသည်။ သူ့လက်ချောင်းတွေက သူရပ်နေသည့်ဘေးကသစ်ပင်အမြစ်များကဲ့သို့ ဖုထစ်လိမ်ကျစ်နေသည်။ ကျွန်တော် ပထမဆုံးအတန်းချိန်မှာ ၀င်သွားတော့ အဖေနှင့်ဆရာဟားဘတ် ကျောင်းထဲလျှောက်သွားနေကြသည်ကို မြင်ရသည်။
အဖေနဲ့ဆရာဟားဘတ် ကျွန်တော်တို့အခန်းထဲဝင်လာတော့ ဂဲသြမေတြီအချိန်ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဖြေများကို ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်တွင်ရှင်းပြနေချိန်ဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက် တိတ်တိတ်ကလေး ၀င်လာပြီးခဏထိုင်နေကြသည်။ အတန်းဖော် ဖရက်က ဂလင်း ကို "ဟိုအဖိုးကြီးကဘယ်သူလဲကွ။ ကြည့်ရတာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းကြီးပဲ။" ဟုတီးတိုးပြောသည်။ "ဒေ့ဖ် အဖေနဲ့တူတယ်ကွ" ဟု ဂလင်းကပြန်ဖြေသည်။ စာသင်ခန်းထဲကကျောင်းသားများ အဖေ့ကိုလှည့်ကြည့်ကြသည်။ သူကျောင်းကိုဘာလာလုပ်ပါလိမ့်ဟု သူတို့တွေးနေကြလိမ့်မည်။ စာသင်ချိန်မပြီးခင်မှာ အဖေနှင့်ဆရာဟားဘတ်တို့ထထွက်သွားကြသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ကစားကွင်းထဲမှာတွေ့ရသည်။ ဆရာဟားဘတ်က အဖေ့ကိုတစ်ခုခုရှင်းပြနေသည်။ အဖေ့ရဲ့သေနတ် အရာကိုသူလမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း အင်္ကျီအောက်မှာမြင်နေရသည်။ မွန်းတည့်ချိန်မှာ ဆရာဟားဘတ် တစ်ယောက်တည်း ထိုင်စားလေ့ရှိသည့် ကျောင်းမုန့်ဈေးတန်းက စားပွဲသေးသေးလေးမှာ အဖေတို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရသည်။ သူတို့ အတူတူစားကြသည်။ ကျောင်းသားတွေကတော့ အဖေစားနေတဲ့ပုံကိုကြည့်ကြသည်။ သူက ခက်ရင်းနှင့်စားရမည့်အစား ဓါးနှင့်စားသည်။ သူကကျွန်တော့်အဖေမှန်းသိသွားတော့ ကျောင်းသားအတော်များများက ကျွန်တော့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပေးကြသည်။ သူတို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ သူ ဆရာဟားဘတ်ကို သေနတ်နဲ့ ပစ်မှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာသိတဲ့အချိန်ကစလို့ အဖေ့အတွက် ကျွန်တော် မရှက်တော့ပါဘူး။ သူတို့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားကြတာပဲ ကျွန်တော်ဝမ်းသာလှသည်။ အဖေ့သားဖြစ်ရတာမရှက်တော့ပါဘူး။ သူတစ်ခုခုထမလုပ်သရွေ့ပေါ့။ ကျွန်တော် ကောင်လေး လမ်းဘတ်အကြောင်းသိသွားသလို ကျောင်းရဲ့အကြောင်းကို အဖေသိသွားခဲ့ပြီလေ။
နေ့လည်ခင်းမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဇီဝဗေဒအခန်းကိုသွားရသည်။ အဖေအဲဒီမှာရှိနေသည်။ အနုကြည့်မှန်ပြောင်းဘေးက ခွေးခြေခုံမြင့်တစ်ခုပေါ်မှထိုင်နေသည်။ ကျွန်တော်တို့ အဖေ့ကို မသိကျိုးကျွန်ပြုကာ လုပ်စရာရှိသည့်ကျောင်းစာများကိုဆက်လုပ်ကြသည်။ အဖေက သူ့ဓါးနှင့် သွားချိုးတစ်ခုကို ခြစ်ထုတ်လိုက်သည်။ ဆရာဟားဘတ်က ၄င်းကို မှန်ဘီလူးအောက်ထားပြီး အနုကြည့်မှန်ပြောင်းကို အနည်းငယ် ချိန်ညှိလိုက်သည်။ ခဏနေတော့ အဖေ့ကို "ကဲ လပ်စတာ။ ကြည့်ပေတော့။ ခင်ဗျားမျက်လုံးကို မှန်ဘီလူးထဲစိုက်ကြည့်လိုက်။ တခြားတစ်ဖက်ကို ပိတ်ထား။"
အဖေက ဆရာပြောသည့်အတိုင်း ခေါင်းငိုက်ကာကြည့်ပြီးပြောသည်။ "တွေ့ပြီ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ၊ သွားထဲမှာ ဒီလိုအကောင်တွေရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူကတွေးမိဖူးပါလိမ့်။ ဒါတွေဟာကြံစည့်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဖူးဆိုတာ သေချာပါတယ်နော် ဆရာရောဘတ်။ "
"မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတကယ့်ပိုးတွေပါ။ ပိုးတွေဟာ ကျွန်တော်တို့သာမာန်မျက်လုံးတွေနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့လောကမှာ ရှင်သန်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနုကြည့်မှန်ပြောင်းသုံးမှရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ မမြင်ရတဲ့ပိုးပေါင်း သန်းပေါင်းများစွာရှိတယ်။ တစ်ချို့က အန္တရာယ်ရှိတယ်။ တစ်ချို့ကကျတော့ အကျိုးပြုတယ်။"
အဖေက ခေါင်းငုံပြီးထပ်ကြည့်ပြန်သည်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်လက်စရပ်ပြီးအဖေ့ကိုကြည့်ကြသည်။ သူက ခွေးခြေခုံရှည်ပေါ်မှာထိုင်နေသည်။ သူ့ဒူးခေါင်းတွေက စားပွဲကိုမှီထားသည်။ သူ့ခြေထောက်တွေက ရှည်ရှည်မျောမျော။ သူ့ကုတ်အင်္ကျီက သူကုန်းလိုက်တိုင်း ပေါ်သွားပြီး သေနတ်ဒင်ကိုမြင်နေရသည်။ ဆရာဟားဘတ်က သူ့အင်္ကျီကို အမြန်ဆွဲချပေးရသည်။
"အိုး။ ဟုတ်ပါ့ဗျာ။ " အဖေအမြန်ထရပ်ပြီး ကုတ်အင်္ကျီကိုဆွဲချသည်။ ရှက်စိတ်နှင့်အဖေ့မျက်နှာ နည်းနည်းနီသွားသည်။ သူ့သေနတ်က ဒီကျောင်းမှာဘာမှအသုံးမကျဘူးဆိုတာ သူသိသွားသည်။
"ဟိုနားမှာ ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဖမ်းမိထားတဲ့ မြွေနက်တစ်ကောင်ရှိတယ်။ သူ့ကို မေ့ဆေးပေးပြီး ခွဲစိပ်လေ့လာကြည့်ပြီး သူ့ကိုယ်ထဲက ပိုးတွေ ခင်ဗျားကိုပြမယ်။"
"မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ ကျွန်တော် ဆရာ့ကိုယုံပါတယ်။ ကျွန်တော် မြွေကိုသတ်တာမကြည့်ချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တစ်ခါမှ မသတ်ဖူးဘူး။ သူတို့ဟာတကယ့်ကိုတော်တဲ့ကြွက်ဖမ်းသမားတွေပါ။ ကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေကို အများကြီးအကျိုးပြုပါတယ်။ ကျွန်တော်သူတို့ကို သဘောကျတယ်။ သူတို့အသတ်ခံရတာကို မမြင်ချင်ဘူး။ ကျွန်တော့်လယ်ထဲမှာဆို သူတို့ကို လုံးဝအသတ်မခံဘူး။"
ကျောင်းသားတွေ အဖေ့ကို ၀ိုင်းကြည့်ကြသည်။ သူဒီလိုပြောလိုက်တော့ သူ့ကို ပိုနှစ်လိုလာကြဟန်ရှိသည်။ ခါးမှာသေနတ်ချိတ်ထားတဲ့ဖခင်တစ်ယောက်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရင်ထဲမှာတော့ မြွေတွေအတွက် နူးညံ့တဲ့နှလုံးသားရှိသူ။ လူတွေအတွက်တော့မဟုတ်။ အိမ်မှာ အဖေ နွားတစ်ကာင်ကို ကြိမ်နှင့်မတို့ဖူးခဲ့။ သူက သူ့ကျွဲတွေနွားတွေကိုလုံးဝမရိုက်တတ်သူ။
"လူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်နိုင်တယ်။ ကျွဲတွေနွားတွေက မကာကွယ်နိုင်ဘူး။ ဒို့က စောင့်ရှောက်ပေးရမှာ။ ကောင်းကောင်းရုန်းတဲ့နွားကိုရိုက်တဲ့လူလောက် အကြင်နာကင်းတဲ့လူမရှိဘူး။" ဟု အဖေအမြဲပြောတတ်သည်။
ဆရာဟားဘတ်က အဖေ့ကို လက်တွေ့ခန်းထဲလျှောက်ပြသည်။ ကျောင်းသားတွေလုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေလိုက်ပြသည်။ ပစ္စည်းကိရိယာတွေအမျိုးမျိုးကို လည်းပြသည်။ ကျွန်တော်တို့ စာလုပ်နေတုန်း သူတို့ ရပ်စကားပြောကြသည်။ ပြီးတော့ သူတို့ထွက်သွားကြသည်။ အခန်းအပြင်ရောက်တော့ သူတို့ ပိုကျယ်ကျယ်ပြောကြသည်။ ဇီဝဗေဒအချိန်ပြီးတော့ ကျွန်တော်လည်း အခန်းထဲကထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်လာသည်။ ကျွန်တော်တို့စာသင်နေ့တစ်နေ့၏နောက်ဆုံးအချိန်ပါပဲ။ ကျွန်တော် တံမြက်စည်းကိုင်ပြီး နှစ်နာရီကြာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရဦးမည်။ ချယ်ရီပင်ချိုးခဲ့မိသည့်လျော်ကြေး ကြေစေရန်ပင်။ အဖေက ကျွန်တော့်ကို နေခိုင်းပါ့မလား တွေးမိသည်။ သူက ကော်ရစ်ဒါမှာရပ်ရင်း ကျောင်းသားတွေတန်းစီထွက်တာကြည့်နေသည်။ ကျွန်တော်တို့ကြားမှာ သူစိတ်လွင့်မျောသွားပုံရသည်။ သူ့ကြည့်ရသည်မှာ တစ်ပင်လုံးသစ်လွင်စိမ်းမြနေသည့်အပင်ထက်က ခြောက်သွေ့ခါနီး ရွက်ဝါတစ်ရွက်လိုပင်။
ကျွန်တော်တံမြက်စည်းကိုယူလိုက်ပြီး စလှည်းတော့သည်။ ဆရာဟားဘတ်လျှောက်လာပြီးကျွန်တော့်ကိုပြောသည်။ "သား တခြားအချိန်မှာလုပ်ဖို့ ဆရာခွင့်ပြုပါတယ်။ အခု အဖေနဲ့ အိမ်ပြန်နိုင်တယ်။ ဟိုမှာ သား အဖေစောင့်နေတယ်"
ကျွန်တော် တံမြက်စည်းကိုချ၊ စာအုပ်တွေယူပြီး လှေကားအတိုင်းဆင်းလာခဲ့သည်။ အဖေကမေးသည်။ "သား နှစ်နာရီ တံမြက်စည်းလှည်းရဦးမှာမဟုတ်လား"
ဆရာဟားဘတ်က အဖေနဲ့အိမ်ပြန်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြတော့ "မဟုတ်ဘူးသား။ မင်း လုပ်ရမယ်။ သူက လူကောင်းတစ်ယောက်ပဲ။ အင်း ငါတို့ခေတ်ကနဲ့ အခု ကျောင်းတွေအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီပဲ။ အဖေက
သစ်ရွက်ကြွေဖြစ်သွားပြီ ဒေ့ဖ်။ ခေတ်နောက်ကျသွားပြီ။ ဒီနေရာဟာ အဖေနဲ့တန်တဲ့ နေရာမဟုတ်ဘူး။ သူသာ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်အဖေလည်းမင်းနဲ့အတူ တံမြက်စည်းတစ်ချောင်းယူပြီးတို့သားအဖနှစ်ယောက်တစ်နာရီလုပ်ကြမယ်။ ဒါဆိုသားလည်းအကြွေးကျေပြီ။ အဖေကူဆပ်ပေးမယ်။ ငါသူ့ကိုသွားမေးကြည့်မယ်။ "
"ကျွန်တော် အဲဒီအကြွေးကိုလျော်လိုက်ပါ့မယ်" ဆရာကပြောသည်။ "ကျွန်တော် ခင်ဗျားသဘောပေါက်စေချင်တာတစ်ခုပါပဲ လပ်စတာ"
"ကျွန်တော် နားလည်ပါပြီဗျာ။ အဲ ဒီလို နားလည်လို့ပဲ သူ့အကြွေးကိုဆပ်ပေးရမယ်လေ။"
"မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ ကျွန်တော့်တာဝန်ထားလိုက်ပါ" ဟုဆရာကထပ်ပြောသည်။
"ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုမျိုးလက်မခံပါရစေနဲ့။ ကျွန်တော်တို့က ရိုးသားတဲ့တောသူတောင်သားတွေပါ။ ဘာကိုမှ အလကားမလိုချင်ပါဘူး။ ဆရာဟားဘတ် အခုတစ်ခါတော့ မှားသွားပြီ။ ကျွန်တော်မှန်သွားပြီ။ ကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်ပါ။ ကျွန်တော် ဆရာ့ဆီက အများကြီးသင်ခန်းစာရခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကလေးက ဆက်ပြီးကြီးပြင်းရဦးမှာ။ လောကကြီးက ကျွန်တော့်ကိုနှုတ်ဆက်သွားပြီ။ ကျွန်တော် လယ်ထွန်ပြီးမိသားစုကိုကျွေးမွေးနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ လောကကြီးကပြောင်းလဲသွားပြီ။ ကျွန်တော်က သာမာန်လူရိုးတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော် အကြွေးတွေကို ရှောင်မပြေးတတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်သားတွေကို ဒီလိုလမ်းမပြချင်ဘူး။ ကျွန်တော်စာသိပ်မတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ဟာမှန်တယ် ဘယ်ဟာကမှားတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ ခွဲခြားတတ်ပါတယ်။ "
ဆရာဟားဘတ်အိမ်ပြန်သွားတော့သည်။ ကျွန်တော်နှင့်အဖေ တစ်နာရီတံမြက်စည်းလှည်းကြသည်။ အဖေ့ကို တံမြက်စည်းနှင့်မြင်ရသည်မှာ ရယ်စရာကောင်းတော့သည်။ အိမ်မှာဆိုလျှင် အမေက တံမြက်စည်းလှည်း။ အဖေက ထွန်တုံးကိုင်နေကျ။ ဘယ်တုန်းကမှ တံမြက်စည်းမကိုင်ခဲ့။ အလုပ်ကြမ်းမှန်သမျှ အဖေကဒိုင်ခံလုပ်နေကျ။ အဖေကပြောသည်။"ငါတံမြက်စည်းမလှည်းတတ်ပါလား။ ကြည့်ပါဦး ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ဖုန်တွေကျန်နေခဲ့တာ။ ငါနဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့အလုပ်ပါလား။ ငါ့အတွက် တံမြက်စည်းက ပေါ့လွန်းနေတယ်။ ငါတတ်နိုင်သမျှတော့ လုပ်ကြည့်တာပဲဒေ့ဖ်ရေ။ ငါကျောင်းကို အထင်မှားခဲ့တယ်ကွာ။" တဲ့ . . .။
ကျွန်တော်လည်း "ဆရာဟားဘတ်က အဖေ့ကို ကျောင်းကိုသေနတ်ကိုင်လာမှုနဲ့ ၀ရမ်းထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိရဲ့လား။ သူတို့အဖေ့ကို ဖမ်းလို့ရတယ်။" ဟုပြောလိုက်သည်။
"အေးဆေးပါကွာ။ ဆရာဟားဘတ်က ငါ့ကိုရဲစခန်း ပို့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူငါ့ကို သဘောကျပါတယ်။ ငါလည်းသူ့ကိုသဘောကျတယ်။ ဒို့နှစ်ယောက် ရင်းနှီးဖို့ပဲလိုတယ်။ သူ့မှာနည်းလမ်းရှိတယ်။ ငါ့ကိုညွှန်ပြခဲ့တယ်။ "
" ဒီမှာသား... မင်းကျောင်းဆက်တက်ရမယ်။ အဖေကတော့ ဒီလယ်တောမှာ အဖေ့ခေတ်တုန်းကအသန်မာဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဖေနောက်ကျန်ခဲ့ပြီ ဒေ့ဖ်။ အဖေက မစွမ်းတဲ့လူတစ်ယာက်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ သားလက်တွေဟာ အဖေ့လက်ထက် နူးညံ့လိမ့်မယ်။ သားအ၀တ်အစားတွေ ပိုကောင်းကောင်းဝတ်ရလိမ့်မယ်။ သားက သားအဖေအဖိုးကြီးထက်ပိုပြီး အမြဲတမ်း သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေ လိမ့်မယ်။ သား မှတ်ထား။ အကြွေးကိုကျေအောင်ဆပ်ပြီး ရိုးသားပါ။ တရိ စ္ဆာန်တွေကိုကြင်နာပြီး မြွေတွေကို ရန်မရှာပါနဲ့။ ဒါ အဖေ ဒီနေ့ကျောင်းကိုလာလို့ ရတဲ့သင်ခန်းစာပဲ။ "
ကျွန်တော်တို့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မှောင်နေချေပြီ။ ကောင်းကင်မှာ ကြယ်တို့တောက်ပနေသည်။ လ လည်းထွက်လာခဲ့ပြီ။ မြေပြင်က အေးစက်နေသည်။ အဖေက အိမ်ပြန်တာ မလော။ မနေ့ညကလုပ်သလို ကျွန်တော် မပြေးနိုင်တော့။ အိမ်မှာအလုပ်တွေပြီးတော့ ည ဆယ်နာရီထိုးလုပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ညစာစားကြသည်။ အဖေက မီးဖိုရှေ့ထိုင်ရင်း တစ်နေ့နေ့ကျရင်အမေ့ကို ခေါ်သွားပြီး သွားထဲကပိုးတွေ ပြမည့်အကြောင်းပြောပြသည်။ အမေသည်လည်း ပိုးကို တစ်ခါမှမမြင်ဖူးချေ။ အဖေက အမေ့ကို အထက်တန်းအကြောင်းနှင့် ဆရာဟားဘတ်ဘယ်လိုတော်ကြောင်းပြောပြသည်။ အဖေက အမေ့ကို တောင်ကုန်းဟိုဖက်က ထူးဆန်းသည့်အထက်တန်းကျောင်း အကြောင်းနှင့် သူတို့ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကနှင့် အခု ဘယ်လိုကွာခြားသွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြနေတော့သည်။
ဂျက်ဆီစတူးဝပ်၏ The split Cherry Tree ကိုခံစား ဘာသာပြန်သည်။
Posted by နည်ရဲဇော် at 2:29 AM No comments: Links to this post
ပြိုင်ပွဲဆိုတာ မြင်းတွေအတွက်ပဲ။ အနုပညာသမားတွေအတွက်မဟုတ်ဘူး လို့ဟန်ဂေရီလူမျိုး ဂီတဆရာနှင့်စန္ဒယားဆရာ Bela Bartok ကတစ်ခါတုန်းကပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ကျွန်မကတော့သဘောတူတယ်။ နောက်ပြီးဆက်ပြောလိုက်ချင်သေးတယ်။ ပြိုင်ပွဲဆိုတာ ကလေးတွေအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူး လို့။ အထူးသဖြင့် အဲဒီပြိုင်ပွဲဟာကိုယ်မဟုတ်တဲ့တခြားလူတစ်ယောက်ပုံစံမျိုးဖမ်းပြရတာမျိုးဆိုရင်ပေါ့။
လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်လောက်က တီဗွီဖွင့်ကြည့်မိတော့ အသက် ၈ နှစ်သမီးလောက် ကလေးတစ်ယောက် တောက်ပြောင် ဆန်းပြားတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ အ၀တ်အစား၊ မိတ်ကပ်တွေအပျံစားလိမ်းထားတာတွေ့လိုက်သည်။ ကလေးမလေးက အချစ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို တကယ့်ခံစားမှုအပြည့် ညုတုတု ပုံစံမျိုးနှင့်ဆိုနေသည်။ သူကလေး ကနေပုံကလည်း တကယ့်ဖိတ်ခေါ်သည်အကထက်မလျော့။ အနှီမိန်းကလေးသာ အသက်ဆယ်နှစ်လောက်ပိုကြီးနေပါက (အကယ်၍ကျွန်မသမီးသာဆိုပါက + ၂၀ နှစ်ပေါ့) လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းရှိပေမည်။ အခုတော့ အသက် ၈ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးအတွက် ၄င်းအိုက်တင်များသည် အတော်ပင် စိတ်မချမ်းသာစရာဖြစ်နေတော့သည်။ သူ့အရွယ်ကလေးနှင့်ပင်မလိုက်ချေ။
၄င်းကား အလားအလာရှိသူ ကြယ်ပွင့်သစ်များကို ရှာဖွေသည်ဆိုသော “talent show” တစ်ခုမှာ ပင်ဖြစ်တော့သည်။ ကျန်သည့် ကလေးတွေအားလုံး သူတို့အသက်ကသာ ဂဏန်းတစ်လုံးစာပင် ရှိသေးသော်လည်း တကယ့်ကို ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော လူကြီးများပမာ ၀တ်ဆင်ထားကြသည်။ သူတို့ လူကြီးတွေကိုဘယ်လောက် တူအောင်တုပနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်အပေါ်မူတည်ပြီး ကလေးတွေကို အကဲဖြတ်သင့်ပါရဲ့လား။ ကျွန်မကတော့ ဒါဟာ မျှတတယ်လို့မထင်ဘူး။ လိုတောင်မလိုအပ်ဘူးထင်ပါတယ်။
တစ်ကြိမ်တုန်းကလည်း ကုန်တိုက်တစ်ခုထဲဝင်သွားတော့ ကလေးတွေအတွက် အကပြိုင်ပွဲ ဆိုတာတစ်ခု တွေ့ရပြန်တယ်။ ကလေးတစ်စု စင်မြင့်ပေါ်တက်လာပြီး “မင်းလိုချင်တာ ငါ့မှာရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ငါ့ကိုကြည့်နေတာ မြင်တယ်… ထိုင်ခုံပေါ်ကထတော့။ မင်း တစ်ခုခု လုပ်ပါတော့လား . . .” ဆိုတဲ့စာသားပါ ဘရစ်တနီစပီးယားစ် ရဲ့ Do something ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ ကကြပါတော့တယ်။ ကျွန်မကတော့ သူတို့ရွေးလိုက်တဲ့သီချင်းကိုသာမက နို့နံ့တောင်မှမစင်သေးသည့် သမီးငယ်လေးတွေက သူတို့ရဲ့တင်လေး တွေကို လှုပ်ကာလှုပ်ကာ ကနေပုံ၊ မျက်တောင်တုလေးတွေကို ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်နေပုံကိုကြည့်ကာ အမလေးတမိတော့သည်။ ပရိတ်သတ်ကြီးကတော့ သြဘာပေးကြသည်။ မိဘလုပ်သူတွေကတော့ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာလက်ခုပ်တဖြောင်းဖြောင်းတီးကြလေရဲ့။ ကလေးသီချင်းတွေနဲ့ရိုးရိုးလေး ပြိုင်တဲ့တခြား အဖွဲ့တွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီး သူတို့အဖွဲ့ ပထမဆုကြီးအိမ်ကိုသယ်သွားကြသည်။
ဒီလိုပြိုင်ဆိုင်မှုမျိုး ကျွန်မ မကြိုက်သည့် အချက်နှစ်ချက်ရှိသည်။ ပထမအချက်က ဒီကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အရွယ်မှာ ရှိသင့်တဲ့စွမ်းရည်မျိုးနဲ့ သူတို့ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်အတွက်ဆုပေးခံရတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဟာ လူကြီး တွေနဲ့မတူတူအောင်နေပြတဲ့အတွက် ချီးမြှောက်ခြင်းခံရတာ။ အရွယ်မတိုင်ခင်မှာ လူကြီးတွေလိုနေဖို့ အားပေးအားမြှောက်လုပ်ပေးသလိုဖြစ်နေတယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ သီချင်းကသီချင်းပဲဆိုတာနားလည်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းတွေကြားလို့ ဒီကလေးတွေသီချင်းထဲကအတိုင်း လိုက်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ကျွန်မလည်း PG18 အဆင့်သီချင်းတွေနဲ့ကြီးပျင်းလာခဲ့တာပဲ။ သီချင်းတွေထဲကလိုတော့မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘရစ်တနီစပီးယားစ်ရဲ့သီချင်းလိုမျိုးတွေနဲ့ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် သီဆိုကခုန်တတ်တာ ကလေးငယ်လေးတွေ အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အလေ့အထတစ်ခုဟုတ်ရဲ့လား။ သာမန်အမြင်မှာတော့ ချစ်စရာကောင်းတယ်ထင်ရ ပေမယ့် “ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်” ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို ကလေးငယ်တွေစိတ်ထဲ မှားယွင်းစွာရိုက်သွင်းပေးလိုက် တာပါပဲ။ (ကျွန်မကတော့ ဒီလိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ ၀င်ပြိုင်နေကြတဲ့ လူကြီးတွေတောင် “ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်” ကို မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်တယ်မထင်မိပါဘူး။ အခုခေတ်မှာ ရုပ်ရည်ကိုပဲ အဓိကထားနေကြတယ်လေ။)
ဒုတိယအချက်ကတော့ ကလေးတွေကို ပြိုင်ဆိုင်တတ်အောင်သင်ပေးတာမကောင်းပါဘူး။ ဟုတ်ကဲ့။ တကယ့်လောကကြီးက ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတာမှန်ပါတယ်။ ပြိုင်ဆိုင်တတ်တဲ့အတွက် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ချို့ရှိတာမှန်ပါတယ်။ ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ရေးကျွမ်းကျင်သူ ဒေါက်တာ Sylvia Rimm ကအောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ငယ်ဘ၀တွေကို သုတေသနပြုပြီး ပြောတာကတော့ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေမှာ အနိုင်ရခဲ့ခြင်းဟာ အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်အဖြစ်ဖော်ပြခံရပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ကလေးငယ်တွေဟာ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုတာကို နားလည်ဖို့ ငယ်လွန်းပါသေးတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုရဲ့အဆွယ်အပွားတွေဖြစ်တဲ့ အောင်မြင်ခြင်း၊ ကျရှုံးခြင်း၊ ဝေဖန်ခံရခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခံရခြင်း စတာတွေကိုတုန့်ပြန်နိုင်ဖို့လည်း နုနယ်လွန်းလှ ပါတယ်။ မိဘ သို့မဟုတ် ဆရာ တွေဟာ သူတို့ ကလေးတွေကို ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ၀င်ပြိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင် သူတို့ကလေးတွေ ခုနက လောကဓံတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ပါ့လား ဆိုတာ သေသေချာချာသိထားသင့်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ အနိုင်ရတဲ့မိဘတွေဟာ ၀ါကြွားဂုဏ်ယူပြတတ်ကြတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ သူတို့ကလေးငယ်ကို ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့တဖက်သားအပေါ်မှာ စာနာစိတ်မထားတတ်အောင် သင်ပေးနေရာရောက်ပါတယ်။ တဖက်ကလည်း ရှုံးသွားတဲ့မိဘတွေကြတော့ သူ့ကလေးငယ်ကို ဂရုဏာမိုးရွာ ကာနှစ်သိမ့်ကြပြန်တယ်။ အရှုံးကို နည်းနည်းကနေ ကြီးကြီးချဲ့ကြပြန်တယ်။ ဒီလိုအပြုအမူတွေဟာ ကလေးတွေအတွက် သင့်လျော်တဲ့အပြုအမူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အတွက် အောင်မြင်မှုနဲ့ရှုံးနိမ့်မှုကို ဘယ်လို မျှမျှတတ လက်ခံရမလဲဆိုတာသင်မပေးပါဘူး။
ကျွန်မကတော့ အကြံပေးချင်တယ်။ ရှင်တို့ဟာ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ရှုံးနိမ့်မှုဆိုတာ ဘာလဲ လို့ သေသေချာချာ ကိုယ့်ကလေးကိုမရှင်းပြနိုင်ဘဲနဲ့တော့ ကလေးကို ပြိုင်ပွဲတွေထဲ ပေးမလွှတ်သင့်ဘူး။ ကိုယ့်ကလေးရှုံးတာနဲ့ ကိုယ်မကျေမချမ်းဖြစ်တတ်တယ် ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရင် အစထဲကမလုပ်ပါနဲ့။ ကလေးတွေအတွက် သူတို့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ မိခင်ဘခင်တွေကို စိတ်ပျက်အောင်၊ မျက်နှာပျက်အောင် လုပ်မိတယ်ဆိုတဲ့အသိလောက် သူတို့ရဲ့နုနယ်တဲ့နှလုံးသားလေးတွေကို နာကျင်ထိခိုက်ရတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ရှင်တို့သာ စိတ်ပျက်သွားရင် မျက်နှာမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ကလေးတွေ ကျိမ်းသေပေါက်ခံစားမိမယ်။ ကလေးတွေအများစုအတွက်တော့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုရှုံးတာထက် မိဘကိုစိတ်ပျက်အောင်လုပ်မိတာက ပိုနာကျင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိဘတစ်ချို့ကတော့ ကိုယ့်ကလေးခံစားချက်ထက် သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေက ပိုအရေးကြီး နေတတ်တယ်။
တစ်ခါတုန်းကလည်း ရှုံးလို့ကလေးကိုရိုက်နေတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ကိုတွေ့ရဖူးတယ်။ “နင့်ကိုငါပြောသားပဲ။ နာနာလေ့ကျင့်ပါဆိုတာ။ နင်ဘယ်တော့မှငါ့စကားနားမထောင်ဘူး။ ကြည့် အခု ဘာဆုမှမရတော့ဘူး။ အချိန်ကုန်တာပဲအဖတ်တင်တယ်။” မိခင်လုပ်သူကတော့ အော်ဟစ်ကြိမ်းမောင်းလို့။ သနားစရာ ကလေး လေးကတော့ မျက်ရည်လည်ရွဲနှင့်။ ကျွန်မအတွက်ကတော့ နှလုံးကြေကွဲစရာမြင်ကွင်းပါပဲ။ တကယ်တော့ ဆုလေးကမဖြစ်စလောက်နဲ့ဘာမှမပြောပလောက်တဲ့ပြိုင်ပွဲကလေးပါ။
ကလေးတွေကို ကလေးလိုနေကြပါစေလားရှင်။ သူတို့မှာ အင်မတန်မှ ချစ်မြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့ ဖြူစင်မှုလေး တွေရှိပါတယ်။ လူကြီးတွေကြေနပ်ဖို့သက်သက် သူတို့ကို သူတို့မဟုတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်လိုနေအောင် တွန်းအားမပေးပါနဲ့လား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတို့တစ်တွေအားလုံး ကလေးဘ၀ကို နှစ်ပေါင်းအနည်းငယ် ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးကြတာပဲလေ။ သူတို့ကိုလည်း သူတို့ကလေး ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းကြပါစေ။ ကလေး တစ်ယောက်က လူကြီးတစ်ဦးလို လုပ်ပြနေတာထက် ပိုပြီးစိတ်မချမ်းသာစရာ ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါဟာ လူကြီးတစ်ယောက်က သူငယ်ဘ၀ကဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးကို အဲဒီကလေးဆီမှာအလျာ်တောင်းနေ တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Bangkok Post, Tuesday, September 27, 2011 mummy says column ပါ Napamon Roongwitoo ၏ Raise your Child, not race them ဆောင်းပါးအားပြန်ဆိုပါသည်။
တလောက သားလေးကို ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဝင်ပြိုင်ခိုင်းဖို့ပြောသည့် ဇနီးသည်ရဲ့စကားအပြီး တွေးမိတာလေးတွေ၊ စိုးရိမ်မိတာလေးတွေနဲ့ တော်တော် တိုက်ဆိုင်နေတာလေးဖတ်လိုက်ရလို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ချိန်တုန်းက ပြိုင်ပွဲဝင်ကလေးတစ်ယောက်ပေါ့။ နယ်မြို့က ကျောင်းလေးတစ်ခုမှာ အတန်းထဲ ပထမ မရလို့ အမေရိုက်တာခံခဲ့ရဖူးတယ်။ အသားနာတာထက် အမေစိတ်ဆိုးသွားတာကို ပို ခံစားခဲ့ရတယ်လေ။ အလယ်တန်းကျောင်းလောက်အထိ စာပြိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုတော့လည်းဘ၀နဲ့နပန်းသတ်နေရလို့ သူများတကာတွေနဲ့ ပြိုင်ချင်တဲ့စိတ် သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။
Posted by နည်ရဲဇော် at 2:27 AM No comments: Links to this post
လူသားနှစ်ဦး။ ရောဂါကသည်းတာချင်းလည်းအတူတူ။ ဆေးရုံအခန်းတစ်ခုအတွင်းလာဆုံမိကြသည်။ တစ်ယောက်ကတော့ သူ့အဆုပ်ထဲက အရည်တွေ စီးဆင်းစေရန် နေ့ခင်းဘက်ဆို တစ်နာရီလောက် ခုတင်ပေါ်ထထိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သူ့ကုတင်က ထိုအခန်းအတွင်းရှိတစ်ခုတည်းသော ပြတင်းပေါက်ဘေး နားတွင်ရှိသည်။ တစ်ခြားတစ်ယောက်ကတော့ တစ်ချိန်လုံး ကုတင်ပေါ်မှာကျောခင်းနေရရှာသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်သား ရောက်တတ်ရာရာ စကားပြောရင်းဖြင့်သာပျင်းရိညည်းငွေ့ဖွယ်အချိန်တွေ ကို ဖြတ်သန်းကြရသည်။ အိမ်ကမိန်းမနဲ့ကလေးတွေအကြောင်း၊ အိမ်အကြောင်း၊ အလုပ်အကြောင်း၊ သူတို့စစ်ထဲဝင်တုန်းကအကြောင်း၊ အားလပ်ချိန်ပျော်ပွဲစားထွက်တုန်းကအကြောင်း စုံအောင်ပြောကြသည်။
နေ့ခင်းဘက် ခုတင်ပေါ်လှဲနေရာကနေ ထထိုင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ဆို သူက ပြတင်းပေါက်ကတဆင့် အပြင်ဘက်က မြင်ရသမျှကို သူ့အခန်းဖော်အား ပြောပြလေ့ရှိသည်။ တဖက်ကုတင်က ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့ ဒီတစ်နာရီလေးအတွင်း သူ့ကမ္ဘာလေးသည် အသွေးအရောင်စုံလှုပ်ရှားသက်ဝင်နေ သည့် ဆေးရုံခန်းရဲ့အပြင်သို့ဖြန့်ကျက်ကွန့်မြူးနိုင်ပေသည်။ ပြတင်းပေါက်မှ လှပသည့်ရေကန်လေး ရှိသည့် ပန်းခြံကိုလှမ်းမြင်ရနိုင်သည်။ ကလေးငယ်များ လှေကလေးတွေစီးကြ၊ ငွေငန်းဖြူနှင့် ဘဲများမြူးထူး ရေကူးကြ။ ငယ်ရွယ်သူစုံတွဲလေးများလက်ခြင်းချိတ်လျက် ရောင်စုံယှက်သွေးဖြာနေသည့် ပန်းဥယျာဉ်အလယ်လျှောက်လှမ်းနေကြ နှင့် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းအောက် အလှပဆုံးမြင်ကွင်းပင်ဖြစ်သည်။ သစ်ပင်အို မြင့်မြင့်ကြီးတွေကြောင့် မြင်ရသည့် ရှုခင်းကပို၍ခန့်ငြားလို့နေပြန်သည်။ မြို့ပြရဲ့ ကောင်းကင်အနားသတ်ကို ခပ်လှမ်းလှမ်းမှပင် မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ပြတင်းပေါက်နားကလူက အဆိုပါရှုခင်းကိုတစ်ခုခြင်း အသေးစိပ်ရှင်းပြသည့်အခါ ကုတင်ပေါ်လှဲနေရသည့်လူက သူ့မျက်လုံးအစုံကိုမှိတ်ထားက အာရုံတွင်စိတ်ကူးပုံဖော်နေတတ်သည်။
တစ်ခုသော နေသာသည့်နေ့လည်ခင်းမှာတော့ ပြတင်းပေါက်နားကလူက စစ်ရေးပြအခန်းအနားတစ်ခု ဖြတ်သွားပုံကိုပြောပြလေသည်။ ကျန်တစ်ယောက်သည် တီးဝိုင်း၏အသံကို မကြားနိုင်သော်လည်း သူ့မိတ်ဆွေဖော်ကျူးသည့်အတိုင်း သူ့စိတ်ကူးပုံရိပ်တွင် အထင်းသားပေါ်လာတော့ သည်။ ဒီလိုနှင့် နေ့တွေ၊ လတွေ ဖြတ်သန်းခဲ့သည်။
တစ်မနက်မှာတော့ သူနာပြုဆရာမလေး သူတို့ချိုးရေအတွက်ရေယူလာပေးရင်း မြင်လိုက်ရသည် ကတော့ ပြတင်းပေါက်ဘေးနားကလူ၏ အသက်ဝိဥာဉ်ကင်းမဲ့နေသည့်ခန္ဓာကိုယ်ပင်။ အိပ်ပျော်ရင်း ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပင်ကွယ်လွန်သွားရှာသည်။ သူမလည်း စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြင့် ဆေးရုံဝန်ထမ်း များခေါ်ကာအလောင်းအား ရွှေ့ခိုင်းရတော့သည်။ အတန်ကြာတော့ ကျန်ခဲ့တဲ့လူနာက သူ့ကို ပြတင်းပေါက် နားရွှေ့ပေးဖို့ဆရာမလေးအား ခွင့်တောင်းသည်။ ဆရာမလေးလည်း သူ့ကိုနေရာရွှေ့ပေးပြီး နေသားတကျဖြစ်တဲ့အခါ ပြန်ထွက်သွားတော့သည်။
ဒီတော့မှ သူလည်း နာကျင်သည့်ဒဏ်ကိုကြိတ်ခံကာ တံတောင်တစ်ဖက်ဖြင့် သူ့ကိုယ်ကို ဖြည်းဖြည်းခြင်းထူမတ်ကာ ထထိုင်ဖို့ကြိုးစားသည်။ ပြတင်းပေါက်ကတဆင့် အပြင်လောကကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကြည့်ခွင့်ရတော့မည်။ နောက်ဆုံးတော့ သူ့မျက်လုံးနှင့်အားရပါးရ မြင်ခွင့်ရပေတော့ မည်။ သူ့ကုတင်ဘေးက ပြတင်းပေါက်ဆီသို့ အားယူကာ ဖြည်းဖြည်းခြင်းလှည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်သည်။ သူမြင်ရသည်ကား ဗလာကျင်းနေသည့် နံရံကြီးပင်။ နောက် သူ ဆရာမလေးကိုမေးကြည့်သည်။ ကွယ်လွန်သွားသည့် သူ့မိတ်ဆွေက ဘာသဘောနှင့် ဒီလိုလှပသည့်မြင်ကွင်းတွေကို ပုံဖော်ပြသွားသလဲလို့ပေါ့။ ထိုလူသည် မျက်လုံးကွယ်နေကြောင်း၊ ဒီနံရံကိုပင် သူမမြင်ရကြောင်း ဆရာမလေးက ပြန်ပြောပြသည်။ ပြီးတော့ “ရှင့်ကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့ ဖြစ်မှာပေါ့ရှင်” တီးတိုးရေရွတ်လိုက်တော့သည်။
ဆရာဖေမြင့် chicken soup ထဲမှာပြန်ဖူးတယ်လို့သိရပါတယ်။ Hospital Window တဲ့။ ဒီဟာကတော့ ကျွန်တော့် ဗားရှင်းပေါ့ဗျာ။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ မူရင်းရေးသူကိုရော ဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ကောင်တွေကိုပါ အမည်မသိရပါဘူး။ ဒီလိုမသိရတာကပဲ ခံစားချက်လေးတစ်မျိုးပေးတယ်ထင်ပါတယ်။
Posted by နည်ရဲဇော် at 2:25 AM No comments: Links to this post
Posted by နည်ရဲဇော် at 2:24 AM No comments: Links to this post
ကျွန်တော်ဟာအားနာတတ်သူလား၊ ပျော့ညံ့တတ်သူလား။ နှစ်ခုစလုံးလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။ သေချာတာကတော့ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ “ဟင့်အင်း“ဟုပြောရမှာအင်မတန်ဝန်လေးတတ်သည်။ ဒါပေမယ့် အခါများစွာမှာ “ဟင့်အင်း“ငြင်းလိုက်မိပြီးမှ နောင်တ ရနေတတ်တာများလာတော့ ဒါကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်လာ ရတော့သည်။ တော်ရုံတန်ရုံ သိကျွမ်းသည့်မိတ်ဆွေ မင်္ဂလာဆောင်ကို လက်ဖွဲ့ပို့ပေးလိုက်လို့ရပါလျက် လမ်းမှာတွေ့မတော်တဆတွေ့ကာ လာဖြစ်အောင်လာခဲ့ဦးနော်ဆိုလို့ သတို့သားနှင့်သတို့သမီး လမ်းလျှောက်တာ၊ ရေခဲမုန့်ခွံ့ကျွေးတာကို ရွှေတွေသီးနေအောင်ဝတ်ထားသည့် အန်တီကြီးတွေအပြိုင်ကြွားကြတာသုံးနာရီလောက်ထိုင်ကြည့်ခဲ့ဖူးသည်။ အလှူတွေမှာ မုန့်ဟင်းခါးစားတဲ့အခါ အိမ်ကမနက်စာစားလာခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ ဟန်မပျက် တစ်ပွဲလောက်စားပါလျက် “စားပါဦး။ ထပ်ထည့်ပါဦး။ အ၀စားနော်မစားရင်စိတ်ဆိုးမှာ” ဟုပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပန်းကန်ထဲထည့်လာသည့်အခါ မကုန်ကုန်အောင်စားခဲ့ရတာမျိုးလည်းရှိသည်။ စာကြည့်နေတုန်း ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖို့ခေါ်သည့် သူငယ်ချင်းကို တစ်ခါငြင်း၊ နှစ်ခါငြင်း၊ သုံးလးခါထပ်ခေါ်တော့ လိုက်သွားရတာမျိုးလည်းရှိသည်။
လူ့ဘ၀မှာ “ဟင့်အင်း” ဟုမငြင်းရမည့်အခြေအနေမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါသည်။ ဒုက္ခရောက်နေသည့်မိတ်ဆွေ အကူအညီတောင်းလာသည့်အခါ ကိုယ်ကလည်း ကူညီနိုင်ပါက ငြင်းဖို့မသင့်ဘူးပေါ့။ လောက၀တ္တရား၊ မိသားစု ၀တ္တရား၊ အလုပ်ဝတ္တရားအရ ”NO” လို့ပြောမရသည်များကတော့ရှိသည်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သာမန်အရေးမပါသည့် ကိစ္စမျိုးတွေမှာ တစ်ခါတစ်ရံငြင်းလိုက်သင့်ပါလျက် ခေါင်းညိတ်လိုက်မိသည့်အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ ကျိန်ဆဲမိတော့သည်။
ဘာကြောင့် ငြင်းဖို့ဝန်လေးရတာလဲဟု တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်သည့်အခါ မိတ်ဆွေပျက်မှာစိုးလို့။ သူငယ်ချင်းစိတ်ဆိုးမှာစိုးလို့။ ကိုယ့်ကိုယ်မလေးစားမှာ၊ မခင်တော့မှာ စတဲ့စိုးရိမ်မှုပေါင်းများစွာဟာ “အားနာတယ်”ဆိုတဲ့စကားလုံးအရေ ခြုံထားတာလို့သာ ထင်တော့သည်။ ကြောက်စိတ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်လည်း ကြာတော့အရပ်ထဲ၊ အလုပ်ထဲမှာ အားနာတတ်သူ၊ ရေမြွေလေး၊ ရှော့မရှိတဲ့သူ ပုံစံပေါက်လာတော့သည်။
ဒါကိုရင်ဖွင့်တော့ ကိုယ့်ထက်အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သည့် မိတ်ဆွေအကိုကြီးတစ်ဦးကတော့ ဒီလိုဆုံးမသည်။
“ ဒီမှာကိုယ့်လူရဲ့။ “ဟင့်အင်း”လို့ငြင်းတတ်ဖို့ကလည်း အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဗျ။ တကယ်တော့ ခင်ဗျားကို တကယ်ချစ်တဲ့ ခင်တဲ့သူသာမှန်လျင် ကိုယ့်လူ ငြင်းလိုက်လို့ ခင်ဗျားအပေါ်အချစ်လျော့သွားစရာမရှိပါဘူး။ စိတ်ဆိုးရင်တောင်ခဏပဲဖြစ်မှာပါ။ သူတို့ပိုပြီးတော့တောင် ချစ်ခင်လေးစားလာဦးမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခင်ဗျားဟာ သူတို့အပေါ်မှာ အမှန်အတိုင်းပြောတတ်တဲ့သူ၊ စစ်မှန်တဲ့သူတစ်ယောက်လို့သိသွားလို့ပဲ။ လူတွေဟာ ကိုယ်လမ်းကျောင်းပေးတဲ့ပုံအတိုင်း ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးဆက်ဆံတတ်တယ်။ ခင်ဗျားက အမြဲတမ်း မငြင်းဘဲ “ဟုတ်ကဲ့” ချည်းသာလုပ်တတ်တဲ့သူဆိုရင် သူတို့ ခင်ဗျားဆီကနောက်တစ်ကြိမ်မှာ မျှော်လင့်ထားတဲ့အဖြေဟာလည်း “ဟုတ်ကဲ့” ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ အမြဲတမ်း “YES” သာလုပ်နေရင် ကိုယ့်လူအပေါ်တန်ဖိုးထားမှုတောင် နည်းလာလိမ့်ဦးမယ်။ ငြင်းသင့်တဲ့ဟာကျရင်အားမနာနဲ့။ ငြင်းသာငြင်းပေတော့ဗျို့။”
ကျွန်တော်လည်း အဲဒီအချိန်ကစပြီး ငြင်းတတ်အောင်ကျိုးစားနေပါတော့တယ်။
“အစ်ကိုကြီးရှင့်။ ကျွန်မတို့ ကုန်ပစ္စည်းလေးအကြောင်း နည်းနည်းရှင်းပြချင်လို့ပါ”
“သြော် ညီမလေး။ အခုလောလောဆယ် အစ်ကို စာရေးနေလို့ပါကွယ်။ နောက်မှနော်. . . ”
“ခဏလေးပါ ရှင်။ ငါးမိနစ်လောက်ပါပဲ။”
“အစ်ကိုနဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့က ဘာမှ . . မဆိုင် . . ပါ . . . .”
“အစ်ကိုကြီးကလည်း အစ်ကို့အမျိုးသမီးအတွက်. .. ”
“သြော် . . . အေး . .ဒါဆိုလဲ. . .”
Posted by နည်ရဲဇော် at 2:23 AM No comments: Links to this post